Forex Options ကို Binary ထရေးဒင်းပေါင်းစပ် | binary Option ကိုထရေးဒင်း - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
ထိပ်တဆယ် Forex binary options များကုန်သွယ်ပေါင်းစပ်၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်, ဘာစျေးကွက်များတွင်အဘို့အကြည့်ဖို့, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုအသုံးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာပါပဲ။
သငျသညျထို binary options များအတွက်ကုန်သွယ်မှုရှာနေလျှင်, သင်သင်ယူမှုကိုကြည့်သင့်ပါတယ် ဘယ်လို Binary Options ကိုအလုပ် နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
ရိုးရှင်းစွာအထား, Forex ရုံကိုအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကဲ့သို့၎င်းတို့၏တန်ဖိုးကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းသိကြသည့်အတိုင်း,
နိုငျငံတစျနိုငျငံရဲ့ငွေကြေးကိုအခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးစနစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာတနျဖိုးရှိပါတယျ။ နှစ်ခုအကြားတန်ဖိုးအတွက်ခြားနားချက်ကိုဝယ်ယူသို့မဟုတ်ရောင်းချနေသည့်အခါဖြစ်စေ, အမြတ်ဖြစ်စေကုန်သွယ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အတွက်ကုန်သွယ်မှုတွင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးများစွာကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်, တိုင်းငွေကြေးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်တန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးသိကြသည်နှင့်အပျေါမှီခိုသောသူမြားကိုသငျသညျအစဉ်အမြဲအကြောင်းကိုကြားရကြပြီသောသူများဖြစ်ကြ၏။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ), ဗြိတိန် ပေါင် (ပေါင်), စသည်တို့ဆွစ်ဖရန့် (CHF), အဆိုပါယူရို (EUR), ဂျပန်ယန်း (JPY), ... ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးနှင့်အများဆုံးကုန်သွယ်ငွေကြေးကိုယ်စားပြုသည်။
Forex အရောင်းအ နှစ်ခုငွေကြေးအကြားတန်ဖိုးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေဖြင့်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် USD: / EUR တဦးတည်းကိုအခြားပိုင်ဆိုင်မှု၏တန်ဖိုးကုန်သွယ်မှုမယ်လို့တူညီသောလမ်းအတွက်နှစ်ခုအကြားကွာခြားချက်ကုန်သွယ်မှုလိမ့်မယ်။
အဆိုပါဒေါ်လာယူရိုငွေကြေးအပေါ်မြေပြင်ရရှိမှုလျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်, သင်တို့ကိုကုန်သွယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ / EUR သို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စျေးကွက်အချင်းချင်းဆန့်ကျင်သောသူတို့အားနှစ်ခုကစားနေသည်ကိုဘယ်လိုမြင်ချင်လိမ့်မည်။ Touch ကို, Range, အမြင့် / အနိမျ့: ရုံကိုအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကဲ့သို့, သငျသညျတူညီသောနည်းလမ်းများနှင့်အတူ binary options များအတွက်သူတို့ကိုကုန်သွယ်မှု။ ဤရွေ့ကားမဆိုအခြား binary options များပိုင်ဆိုင်မှုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်များတွင်အသုံးပြုကုန်သွယ်နည်းလမ်းများ၏တူညီသောမျိုးရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်နှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သင့်သည်။
စီးပွားရေးသတင်းကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ ဒါကြောင့်မြေပြင်ရရှိမှုသို့မဟုတ်မရှိမရှိ - စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးသတင်းအမြဲတမ်းဒေါ်လာကိုအခြားငွေကြေးဆန့်ကျင်လုပ်နေတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
အများအားဖြင့်ကဒေါ်လာစျေးဟာယူရို, ဒါမှမဟုတ်ဗြိတိသျှပေါင်, ဒါမှမဟုတ်အနည်းငယ်အခြားသူများကိုဆန့်ကျင်လုပ်နေတယ်ဘယ်လိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ သငျသညျဤအချက်အလက်နားထောင်ရန်နှင့်စုပ်ယူ up ပြုလုပ်သို့မဟုတ်မဆင်းရပါမည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာလေ့လာသင်ယူသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ထိုအခါ, အွန်လိုင်းရဖော်ပြခဲ့တဲ့သူတွေကိုငွေကြေးဆန့်ကျင်ဒေါ်လာစျေးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်အဘို့သင့် binary options များမှာရှာဖွေနေစတင်ပါ။ သင်ဂရပ်နှစ်သို့မဟုတ်မြင့်တက်သောအခါသတိထားမိနိုင်အောင်ကနောက်ခံအတွင်းသတင်းနှင့်အတူသွားမယ့်အဖြစ်ကိုလေ့လာချင်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်ရှင်သောဒေတာဂရပ်မှထွက် Check - ကတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောလမ်းအတွက်တုံ့ပြန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်သတင်းအမျိုးအစားကဘာလဲ?
သင်က၏ Hang ရရှိပါသည်တဲ့အခါမှာ, သင်အမှန်တကယ်ကုန်သွယ်စတင်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုစတင်သလဲအပေါ်အကြံပြုချက်များကိုအောက်ပါထိပ်တန်းတစ်ဆယ်ပါလိမ့်မယ်:
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / EUR: လူတိုင်းယူရိုကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာအတွက်ယနေ့ဒေါ်လာစျေး၏အဓိကပြိုင်ဘက်ကြောင်းကိုသိတယ်။ တချို့ကပိုင်ဆိုင်မှုယူရိုဒေါ်လာအတွက်ကုန်သွယ်ကနေအကူးအပြောင်းကိုစတင်ပါပြီ, ထိုအဘို့အကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်: ပင်ယူရိုဇုန်အကျပ်အတည်းနှင့်အတူယူရို, တန်ဖိုးရှိသောငွေကြေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်၏နံပါတ်တဦးတည်းကုန်သွယ်ရွေးလုပ်ပါ။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / GBP: အခြားအစဉ်အလာသြဇာငွေကြေးကိုကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတယ်နှင့်ဗြိတိသျှပေါင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်: ကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံးဘဏ်များနှင့်ကုန်သွယ်အိမ်များအများအပြားလန်ဒန်မြို့တွင်တည်ရှိပြီးနေကြသည်။
သူတို့ကဗြိတိန်အနေနှင့်ရာစုနှစ်များစွာပြန်သွားပါ။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်မှုစနစ်တကယ့်တည်ငြိမ်နှင့်အရေးကြီးသောငွေကြေးထုတ်လုပ်သွားမယ့်သေချာလောင်းရဲ့ဒါတကယ်တော့, တဦးတည်း, သူတို့ကခေတ်သစ်အရင်းရှင်စျေးကွက်တီထွင်သည်ဟုဆိုနိုငျသညျ။ သမိုင်းကြောင်းအရ, အဆိုပါပေါင်နှစ်ပေါင်းရာချီများအတွက်ငွေကြေးကုန်သွယ်အတွက်အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးတဦးတည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အချို့သောနည်းလမ်းများမှာယူရိုအဆိုပါဒေါ်လာစျေးထက်ပေါင်ဆန့်ကျင်ပိုပြီးများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY: တရုတ်နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံ: အရှိဆုံးဟာဒေါ်လာဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်သောအရှေ့နှစ်ခုလူအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ လူတိုင်းသိတယ်အဖြစ်နှင့်အညီ, ဂျပန်စျေးကွက်နေဆဲကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအတွက်မြင့်မားတဲ့နည်းပညာများအတွက်အများဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။
တရုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်မှီခိုနေစဉ်တွင်, ဂျပန်ကြွေထည်များနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဤရွေ့ကား Forex အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY အတွက်ကုန်သွယ်၏တစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့ကုန်သွယ်မှုနဲ့ကိုယ်စားပြုထားတဲ့အတွက်အရေးကြီးသောလယ်ကွင်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအရေးကြီးဆုံးထဲကတစ်ခုဖွင့်အဖြစ်သင်ဤငွေကြေးကိုကုန်သွယ်နားလည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CHF: ရှိပါသည်တမျိုးတည်းဖြစ်သည်၎င်း၏ဘဏ်များအဘို့အများအားဖြင့်လူသိများကမ္ဘာပေါ်မှာင်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောဘဏ်များအချို့ရှိသည်ကြောင့်: နှင့်ဆွစ်ဖရန့်နိုင်အောင်အစွမ်းထက်သည်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CHF အတွက်ထရေးဒင်း, သင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်းသတင်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုခငျြပါလိမ့်မယ်။ ထိုဖွင့်ဆွစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းသတင်းမဆိုလိုပါ။ ဤအရာများစွာကို၎င်းတို့၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာတစ်ဦးချင်းစီကုန်သွယ်ရေးကနေအကျိုးသေချာသောဆွစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်, ဖြတ်သန်းရပါလိမ့်မယ် - ဒါဟာပိုင်ဆိုင်သောပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အများပြည်သူဖြစ်စေသည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ကြီးမားသောငွေပေးငွေယူမဆိုမျိုးကိုဆိုလိုသည်။
အတွက်အဘို့အကြည့်ဖို့ပေါင်းစပ်၏များစွာသောအခြားမျိုးရှိပါတယ် Forex binary options များအတွက်ကုန်သွယ်မှု။ သင်ကဤနှစ်ခုကိုအရေးပါသောအနှင့်ဥရောပငွေကြေးအကြားမည်သည့်အာဏာကိုရုန်းကန်ထံမှငွေရှာနိုင်လျှင်ကြည့်ဖို့ EUR / GBP ကဲ့သို့သောငွေကြေးအရောင်းအထွက်စစ်ဆေးချင်ပါလိမ့်မယ်။
ဥရောပအာကာသအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းထွက်လာအထူးသဖြင့်အခါ, သို့မဟုတ်ပင်နျူကလီးယားသုတေသနအကြောင်းကိုသတင်း - ထိုအခါလည်း JPY / EUR အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။
ဥရောပမကြာခဏကဲ့သို့သောအမည်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ၎င်းတို့၏အလွန် High-end နည်းပညာလုပ်ငန်းများအများအပြားများအတွက်ဂျပန်မြင့်မားတဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီများအပေါ်မှီခို မစ်ဆူဘီရှီ နှင့်စက်ရုပ်များနှင့်တိကျစွာကိရိယာသုတေသနအတွက်ဟွန်ဒါ။
ဤငွေကြေးစျေးကွက်၌သင်တို့အဘို့အ Herald နိုင်ပါတယ်အခွင့်အလမ်းများအဘယ်အရာကိုမျိုးကိုကြည့်ရှုရန်သတင်းတွင်ဤကြေညာချက်များ၏အားသာချက်ကိုယူပါ။
အဘို့အကြည့်ဖို့နောက်ထပ်တဦးတည်း GBP / CHF ဖြစ်ပါသည်: ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဘဏ်လုပ်ငန်းကြီးစိုးဘို့နှစ်ခုအကြားတိုက်ပွဲဟာယူရိုဇုန်အတွက်အကျပ်အတည်းနဲ့ခေါင်းကိုလာသေး၏။ ထိုကြောင့်ထိုနှစ်ခုဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်များကိုတစ်ဦးဦးခေါင်းမှလာမယ့်နေကြသည်နှင့်အသင်တို့သည်ဤအရပ်မြင့်ပေးချေမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်အစာရှောင်ငွေရှာနိုင်ပါတယ်။
သင်ရွေးချယ်ဘယ်ဟာကိုကွဲပြားခြားနားပေါင်းစပ်အသက်ရှင်ဂရပ်များအခြေခံလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပြောင်းလဲစျေးကွက်ကိုယ်စားပြုဖို့အသုံးပြုနိုင်လွန်းသတိရပါ။ အဲဒီမှာငွေကြေးတိုင်းမိနစ်ထကျကြရခြင်းမှာအကြောင်းများစွာရှိပါသည်, ဒါပေမယ့်သင်ကပိုပြီးရှုပ်ထွေးစွာတစ်မိနစ်အကြောင်းပြချက်ရှာနေခင်သင်ကြီးတွေအမြစ်အကြောင်းတရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်သေချာပါစေ
Tags: ဒွိကုန်သွယ် apps များ, ဒွိကုန်သွယ်ပွဲစားများ, ဒွိကုန်သွယ် Forex, ဒွိကုန်သွယ်အုပ်စုတစ်စု, ဒွိကုန်သွယ် option ကို, ထို binary ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း, ဒွိကုန်သွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, ဒွိကုန်သွယ် Scan ကို, ဒွိကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ, အဆိုပါ binary ကုန်သွယ်သရုပ်ပြ, တစ်ဦး binary ကုန်သွယ်ကားအဘယ်သို့, တစ်ဦး binary ကုန်သွယ်အကောင့်ကဘာလဲ